Ụbọchị My Pet » Pụtara a Kiss
The pụtara a nsusu? The million-dollar question in relationships. M na-eche gị mkpa itinye ya na onodu nke mmekọrịta ị na-na onye ị na-na mmekọrịta. Ọ bụrụ na ị na-a okodu mmekọrịta jiri ya tụnyere mmekọrịta ọhụrụ na pụtara nwere ike ịbụ dịtụ iche iche doro anya ma àgwà nke onye ị na na na na na na nwere ọtụtụ ihe na-eme na ihe ọ pụtara na ha kwa. Ka nwere anya na ndị dị iche iche pụtara na ebube, ma ọ bụ otú dị ebube, nsusu.
The Old ihunanya
Ọ bụrụ na gị na ịhụnanya bụ ndọrọ, tactile ụdị mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe nnọọ obi ụtọ na e asa na nsutu! Ochie ihunanya ewe ịhụnanya kpọrọ ihe ma ha nsutu ga-ejupụta na ịhụnanya, passion, and love. Na-agbakụ ya ma jide n'aka na-egosi ha na-akparaghị ókè n'anya azụ. Na-etinye mgbalị ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụghị gị bụ kasị ihunanya na ọdịdị onwe gị. The ihunanya ụdị ga-adị ka nke a ma ọ bụ a mmekọrịta ọhụrụ ma ọ bụ a kwara mmekọrịta ma dị ka mmekọrịta etolite ma na-aga n'ihu ha nsutu ga-aghọ ihe na ọzọ bara uru.
The akpali agụụ Type
The lustful type in a relationship in its fancy is to be taken with a pinch of salt but enjoyed nonetheless! Dị ka oge na-aga a nsutu ga-ahapụ abịa n'anya ma ọ bụrụ na mmekọrịta-akawanye njọ. Nanị nye ya oge. The akpali agụụ ụdị na-ewe oge ha ka ịhụnanya n'ime obi ha ma mgbe ị bụ otu onye maka ha ka ha ga-emekwa ka ị maara banyere ya! Ha nsusu ọnụ ga-abụ otu ụzọ ha na-eme!
There are many types of kisses from the full-on lingering, omiiko nsusu ọnụ ka adụ, nwayọọ susuo ya ọnụ. There are public shows of affection and private shows of affection.
Zuru-na nsusu ezigbo na ahuhu bụ ihe ịrịba ama nke ezi ịhụnanya. Ha achọghị egbugbere ọnụ ha na-ahapụ gị na ọ bụ kama ufiop na ndị mara mma ebe n'ihi na oge ị na-ma ọ bụla ọzọ si ụwa dum, na-ejide elu a oge na miri-ejikọta site n'ike nke nsusu.
The adụ, nwayọọ susuo ya ọnụ bụ otu nke a otutu di na nwunye ịhụnanya na-eji. Ọ bụ ebe ha bụ n'ezie ala ọnụ ma eleezie ọ bụkwa ndị nsusu ọnụ nke ọtụtụ ndị na-eji dị ka mbụ ha nsusu ọnụ n'ihi na ha bụ ihere na-ejighị n'aka otú ịgakwuru nnukwu oge ná mmekọrịta ha.
The public kiss can be taken one of two ways and depending on the person you are involved with, ị mara ihe dị iche na ha mkpali. One way is to show off that they have someone who is on the negative side but on a more positive side, others do this because they are proud to be with you and don’t care who knows you are together.
A ọtụtụ ndị na-adịghị amasị dum ngosipụta a nke n'anya ma ọ pụtaghị na ha adịghị gị n'anya. Like the public kiss though it can take two ways and again it will depend on the person you are with. Ọ ga-adị mfe ka ị mara ma ha na-esusu ọnụ gị na nzuzo n'ihi na ha ekweghị na ma ọ bụ ihere na PDA ma ọ bụ ma ọ bụ n'ihi na ha bụ adịghị mpako zuworo unu isusu gị n'ihu ọha.